【Indlu yeeNdwendwe ye-SYRI Boutique】Itafile yesinxibo/isofa eyonqenayo B3 - I-Airbnb
【Indlu yeeNdwendwe ye-SYRI Boutique】Itafile yesinxibo/isofa eyonqenayo B3
UAdam unezimvo eziyi-81 zezinye iindawo.
Ihotele ifumaneka kumbindi wedolophu yaseVientiane, kufutshane kakhulu neBala leSizwe kunye neMyuziyam; Iimitha ezingama-500 kude noMlambo iMekong kunye nemarike yasebusuku; yimizuzu eli-10 kuphela yokuqhuba ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseWattay.
Ulwamkelo lunokubonelela ngenkonzo yobuqu yeeyure ezingama-24 kuwe, iWiFi yasimahla enesantya esip…